Mixval Money Counter Mixed Cash & Bill Denominations Model MV1 - CashCounterMachines.com
musha MIXVAL MV1 Imwe Pocket Yakasanganiswa Mari Counter
Yakasanganiswa Dhinominesheni Bhiri Kuverenga
Gadzira kuverenga yakavhenganiswa mari iri nyore neMV1 kubva MIXVAL. Muchina wekuverenga unouya usati watakurwa nemari nhatu dzakasiyana, kusanganisira USD (US Dhora), CAD (Canadian Dhora), uye MXN (Mexican Peso). Uyezve, yakakosha-odhita nyika mari inowanikwawo nechikumbiro. Iyi ine simba desktop desktop counter inoratidzira hunyanzvi hweCIS tekinoroji iyo ichakurumidza kugadzirisa kuburikidza nemastock emasanganiswa emabhizimusi emasangano uye inopa huwandu hwese hwenhamba yekupedzisira kuverenga pane iri nyore kuverenga kuverenga. Iyo inomhanya neinoshamisira kumhanya inosvika chiuru nemazana maviri emabhiri paminiti, saka unogona kushandisa nguva shoma kuverenga, uye yakawanda nguva pane mamwe mabasa. Iine MV1,200 yakavhenganiswa Mari Counter, kurongeka uye kunyepa kwekudzivirira kunovimbiswa neUV, MG, IR, uye CIS kuona. MIXVAL ine musana wako nemakore matatu mashoma mugadziri warandi. Kuverenga matura emabhiri hakuna kumbove kuri nyore, kushanda, uye mari - tenga iyo MIXVAL MV1 bhiri yekuverenga muchina online nhasi.
Sezvo kupera kwezuva kunoswedera, ndozvinoitawo basa riri kuuya rekuverenga mari yezuva. Iine MIXVAL MV1 Yakasanganiswa Mari Counter unogona kubvisa kushushikana kunoenderana nekuverenga, kuverenga zvekare kana iwe uchinge wavhiringidzika, uye kuverengazve kuverenga kuti usimbise kunyatso. Ingo popura matura ako emabhiripiti mune yepamusoro hopper uye zvinobva zvangoerekana zvapfuura nemumabhiri ako, uchigovaisa pazasi mune yakarongedzwa stack uye kuratidza yekupedzisira kuverenga pamberi pechimushini. Iyi yekupinda-level yekuverenga mari inozozvibhadharira nekukurumidza, kuvandudza kugona kwehupenyu hwako hwezuva nezuva, uchipa pfungwa yekuzorodza uye chivimbo mukurongeka uye kuchengetedzwa kweyuniti. Iyo MIXVAL MV1 Yakasanganiswa Mari Counter inogona kubata ako ese emari kuverenga zvaunoda.
Inosanganisirwa nekutenga kwako kweiyo modhi MV1 bhiri kontrakiti ndeye matatu (3) egore gadziriro yemugadziri yekukupa rugare rwepfungwa kuti muchina wako ucharamba uchimhanya zvakanaka bhizinesi rako richikura. MIXVAL ikambani yeUS inogara muLos Angeles uye iri pano kuti ikutsigire iwe nekutenga kwako.
Otomatiki Bill Kuonekwa
Dutu remabhiri akasanganiswa nemashanu, makumi maviri, mazana, uye chero imwe bhiri haina dambudziko nekambani yeMV1. Iyo inozvionera yega kukosha kwemabhiri uye nekunyatso kuwedzera iwo pamwechete, ichiratidza kukosha kwese uye huwandu hwezvidimbu zvakaverengwa.
Nhanhatu-Nhanho Yekunyepedzera Kuonekwa
Iyo MV1 kubva kuMIXVAL ine nhanho ina yekunyepedzera yekuona maitiro inosanganisira UV ultraviolet mwenje, MG magnetic ink ongororo, IR infrared detection, uye CIS yekubata yemufananidzo sensor. Maitiro aya anoitwa pasina kudzikisira kumhanya kumhanya, uye chengetedza mashandiro acho akanyarara.
Iyo MIXVAL MV1 inoratidzira matatu matatu manhamba ayo anopa kumhanya kwakasiyana kweanogona kuita mazana masere, chiuru, kana chiuru nemazana maviri emabhiri paminiti. Kana yaiswa munzira yakavhenganiswa, inomhanya nepamhanho yemabhiri mazana masere paminiti. Iyo yepamusoro hopper inobata kusvika mazana matatu emabhiri panguva. Aya mabhiri anogona kusanganiswa mune chero dhinominesheni mune imwechete mari. Iyo stacker iri pasi kumberi kwemuchina uye inobata yakawanda semazana maviri emabhiri panguva imwe mune yakachena, yakaenzana mativi. Iyo inopa kuenderera kwekudya kuitira kuti iwe ugone kuramba uchiwedzera mabhiri kune epamusoro hopper sekukosha kwayo, uchiabvisa iwo kubva yekubuda tireyi sezvaunoenda, kudzamara basa rapera.
Serial Nhamba Kuongorora
Iyo MV1 mari kaunda inoratidzira serial nhamba kuverenga kuti uverenge yakasarudzika nhamba yakapihwa kune yega bhiri, saka iwe une marekodhi kuitira kana nzira yekuongorora ikazombodiwa. Iyo inogona kuendesa kuverenga kuverenga kuPC yako uye inogona kuve yakabatana kune yakasarudzika MVPR1 Thermal Printer (inotengeswa zvakasiyana) kudhinda yakadzama mishumo.
Yakakwana uye isina huremu, iyo MV1 iri nyore kufamba, ichiyera 13.8 "x 13.4" x 12.9 "uye inorema angangoita 18 lbs. Iyo inoratidzira yakajairwa 100-240V AC magetsi uye iri nyore kutamira nekubva kunzvimbo dzakasiyana. Uya neyakareruka ye otomatiki bhiri kota chero kwaunoda iwe.
Inodhura pasina kupa zvibayiro mhando
Yakakwana yemari kuverenga
Misanganiswa yakavhenganiswa inogamuchirwa
Speedy bhiri inoverengwa inosvika chiuru nemazana maviri paminiti
Easy-to-kushandisa pamwe nyore chidhiraivho uye kuratidza
MIXVAL brand yakabva kunze kweLos Angeles, CA, USA
Inosanganisira waranti yemugadziri wemakore matatu
-Dimensions: 13.8 "x 13.4" x 12.9 "
-Net Kurema: 18 Pondo
-Counting Speed ​​Modes: 800, 1000, 1200 mabhiri paminiti
-Kukura kweZvikwereti Zvinoverengeka: Zvishoma 110 x 60 mm, Maximum 185 x 90 mm, Ukobvu 0.08~0.12 mm
-Feed Sisitimu: Roller Kukakavara Sisitimu
-Hopper Kugona: 300 mabhiri
-Stacker Kugona: mazana maviri emabhiri
-Power Supply: AC 100 ~ 240V + 10% 50/60 Hz
-Kushandisa Simba: 50W Maximum 0.5A (100 ~ 240 VAC)
-Kutonhora: 32 ° F ~ 95 ° F (iri kushanda)
-PC Chinongedzo Chemukati: (RS-232C)
-Interface: Printer Interface(RS-232C) kana USB2.0/3.0 Interface
-Easy jam kubvisa uye sensor yekuchenesa
-Iviri mbiri-inomhanya CIS sensors ye200dpi
Yakaverengerwa kubva ku290 ongororo yevatengi.